Ukufundwa kwezinkanyezi, ngendlela efanele, kungasiza kakhulu ukubhekana nezinkinga eziningi. Vele uthole ukuthi ubani okhethiweyo wakho ngesibonakaliso se-Zodiac, futhi kuyoba lula kuwe ukukhamba futhi uthandane nawe. Yebo, uma usebenzisa izinkanyezi ukuze wakhe ubuhlobo nomuntu othandekayo, nguwe kuphela oyoyisebenzisa. Kodwa empeleni kuvame ukuba khona lapho kukhona abaphikisana nabo abalungele ukusebenzisa noma yiziphi izindlela ukuze bakuhlukunyeze umuntu futhi babhubhise ubuhlobo bakho.
Uma kukhona umphikisana ekugcineni, ungase usebenzise nokubhula ngezinkanyezi. Iqiniso liwukuthi kuye ngokuthi ngubani ozoyisebenzisa nge-zodiac, akuxhomeke ekuziphatheni kwakhe kuphela, kodwa futhi ngokubaluleka kwezinhloso zakhe. Ngakho ngaphambi kokuba ukwesaba futhi uhlele ngaphambi kwesikhathi izihlamba, zama ukuthola isibonakaliso se-zodiac somncintiswano, obuka i-vampire yakho. Ngakho-ke, uzokwazi ukuqonda ukuthi ungumuntu onjani, kungakhathaliseki ukuthi kufanele avikelwe nokuthi yiziphi izinhlelo zakhe ezingenzeka.
Abamele izibonakaliso zomoya bangase bazame ukuthatha isihambi ngaphandle kwendoda kuphela ngenxa yokuhluleka kwakhe ekuthandweni ngaphambili. Abesifazane besifazane bavame ukudumazeka, ngoba banikeza amadoda abo izimfanelo ezingelona iqiniso, okwenziwa ngokungaqiniseki.
Uma umphikisi wakho i-Zodiac Gemini, ungakhathazeki kakhulu, ngoba lo wesifazane akazithathi ngokungathí sina ezintweni ezithandwayo. Kuyinto ephikisayo, ngakho esikhundleni sokulwa nawe, kungcono ukuzitholela ukhetho olusha. Uma othandekayo wakho enakekele owesifazane onjalo, cishe cishe waqala ukukhuluma naye futhi wakhanga amanethiwekhi akhe njengeSirene. Kodwa ungakhathazeki, ukucindezela kwalo kuyokwanela isikhathi eside.
I-rival-Libra iyinhlangano yezombusazwe futhi inemininingwane enhle kakhulu, ngakho kungaba yingozi. Lo wesifazane uzokhipha inzondo, awukwazi ukuwuhoxisa engxoxweni eqondile, kusukela kubaseLibyya bathanda izimangalo nokuhlaselwa okuvulekile. Ngakho uma ufuna ukuqeda umphikisana, vele ubonise ukucindezela futhi kuzozidela ngokwakho ukuthola umuntu ongenawo ukhululekile.
Abase-Aquarians abaqabukeli ukubhubhisa ubuhlobo. Lo wesifazane angasebenzisa owakhethile njengomngane, kodwa hamba phambili futhi uphule ngamabomu ubuhlobo bakho ngeke. Akudingekile, njengoba esejabule kakhulu ukuthandwa kakhulu kobulili obuhlukile futhi unabaningi abamthandayo.
Abesifazane abangekho ikhodi yezimpawu zomlilo, okokuqala, bazame ukuzimela.
Izimpikiswano-Ama-Aries ahlukumezeka nokuzethemba. Lo wesifazane usebenza kakhulu, uziphatha njengomzingeli wangempela. Ngakho-ke, uma ethanda umuntu wakho, uzokwenza konke okusemandleni ukuze amthole. Kufanele uziphathe kanjani ukuze uhlwithe okhethiweyo wakho kusukela kuma-Amazon? Mkhiphe ngaphandle kwakho. Owesifazane onjalo othukuthele uba umshayeli obesabekayo, okhubazekile, obhala ngokuphelele amazwi akhe nezenzo zakhe. Uma indoda yakho ibona ubuso bayo beqiniso, ngokuqinisekile, yena ngokwakhe uyofuna ukuhlukana naye.
I-Razluchnitsa-Sagittarius ibalwa kakhulu. Uhlala ekulungele ukuzwelana nendoda, ulalele izikhalazo futhi uyiqonde ngesikhathi esifanele, esebenza ngaso sonke isikhathi. Akunakutsho ukuthi yena uqobo uhlala epanyeni lakhe. Ukuziphatha okunjalo kuholela ekutheni umuntu ngokwakhe ufika kuye. Kodwa lo wesifazane unesimo esikhulu kakhulu: ngaso sonke isikhathi ufuna ukulawula konke, kuhlanganise nendoda yakhe. Ngakho-ke, ukuze ulinqobe, ziphathe ngokuphambene, ungatholi ukuthi ungubani nokuthi ungubani, ayeke ukusola. Le ndoda izokuqonda ngokushesha umehluko.
Uma umphikisi wakho engummeleli wamanzi, kufanele uqaphele. Laba besifazane banomzwelo futhi bangaqondakali, bathandana futhi banomusa.
Ukuphikisana ingelosi yangempela enyameni. Uziphatha ngokuthobeka futhi angenakuzivikela, ngakho-ke indoda eduze kwesigqoko izozizwa njengeqhawe langempela kanye nomvikeli, okungeke ukwazi ukuthandwa, ikakhulukazi uma ungowesifazane ozimele ozimele. Ukuze ususe ophikisanayo, phikisana nabathandekayo bakho futhi umcasule. Ingelosi engenacala i-maskabezzaschitnogo ishabalalala masinyane, futhi ngokuphindaphindiwe kuyoba nesifazane ongenamakhaza angenazimpendulo, okuzokwenza kube lula ukuhlukanisa le ndoda.
U-Scorpio wesifazane uyingozi i-razluchnitsa.Ona real femme fatale. Uhlakaniphile kakhulu futhi u-sexy, ngakho-ke ukuze uthole cishe noma yimuphi umuntu kuyo ngeke kube nzima. Kanjani nge-neboronsya? Unomphumela owodwa ophawulekayo - owesifazane waseScorpio unothando lwemali kakhulu. Khombisa othandekayo wakhe umoya wakhe wezintandokazi kanye nesithakazelo sakhe.
Inhlanzi ephikisanayo ihlakaniphile futhi iyinhlobonhlobo, kodwa ihlezi futhi ingazinzile. Akakwazi ukuhlala nendoda eyodwa, ngezikhathi ezithile ezishintsha kwabanye. Khombisa othandekayo wakho emoyeni wakhe futhi ashintshe, futhi ukunqoba kuyoba ngokwakho.
Lo wesifazane ubala kakhulu futhi eqondile, uqonde ngokuqinile futhi ngokucophelela. Umlinganisa wonke amazwi, ubala zonke izenzo, ulungele ukuba emthunzini uma nje ufuna, ulinde isikhathi esifanele.
I-Taurus ephikisanayo inhle, ihlungwa kahle futhi kubalulekile ukuthi ayikwazi ukusiza ukuheha umuntu. Uyakwazi ukulinda isikhathi esifanele sokuhlasela. Kodwa i-razluchnitsa ngokuhamba kwesikhathi izofuna ukuzinza, futhi izoqala ukuphikelela ngokuqinile ukuthi, kungenzeka ukuthi indoda ngeke ikuthande.
Abesifazane be-Virgo basuke bengavamile kakhulu. Zilungile ngalokhu, ngakho-ke, lo muntu ngokwakhe akalithwa yi-Virgo ophikisana naye. Uma inoveli iqala, kusho ukuthi iNtombi iyakuthanda ngempela.
Owesifazane waseCapricorn, cishe, ngeke ashaye umuntu ongaziwa. Unamanye amanani futhi usazama ukunciphisa impilo yakhe yesikhathi esizayo ebusheni bakhe.
Khumbula, ebuhlotsheni bakho kumele kube khona uthando nokuvumelana, inhlonipho nokuqonda. Futhi-ke othandekayo wakho ngeke akuguqule kunoma ubani, futhi izinkambo eziyinkimbinkimbi kakhulu zama-razluchnits ngeke zisebenze.
Izimfihlakalo Zengqondo KaMuntu
Izifo zezingane ze-penis kubafana
Roach in sauce lemon
Izisusi ezibhemayo nge ushizi
Yini engabangela ukuphelelisa abesifazane